Mpihiran’i Turkmenistan Iray Mampiakatra ny Varotry ny Apple · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2015 3:12 GMT
Kakajan ao anatin'ny fampisehoana tanteraka. Nozaraina tao amin'ny Vkontakte.
Vao haingana ny Global Voices no nitatitra ny fomba fanenjehan'ny governemanta ny fampiasana finday raitra tamin'ilay lahatsary notontosain'ireo ankizivavy mpianatra mandihy ny “Turn Up the Love” an'ny Far East Movement izay mbola mahazo mpijery an'arivony ao amin'ny Youtube.
Saingy tsy afaka manala azy ireo tanteraka izy ireo.
Nandrakitra lahatsary mozika orizinaly antsoina hoe “iPhone”, , natokana hoan'ny maodely finday malaza indrindra ao amin'ny firenena, mba halaza ao Turkmenistan i Kakajan Rejepov.
Araka ny filazan'ny mpaneho hevitra ao amin'ny tambajotra sosialy Rosiana Vkontakte, mahatonga anao maika hividy iPhone ilay hira.
Tsy maintsy mividy I Phone 6 Fotsy, fotsy tsy isalasalana avy hatrany aho =)
Tsy dia be pitsony ny tononkiran'ilay hira satria mampaharevo ny fidobony, fandrindrana manintona:
Velomy ny iPhone fotsy
Tsy hankaleo ahy ny korintsan-kira mahafinaritra
Mahazo 3G izany ary manao aterineto aho izao
Hotrohako ianao, ry malalako
Tazomy mafy tsara izy ary aza avela hianjera
Tsy dia be lanja ny findaiko
Manome tombony ahy ny iPhone fotsiko
Manao sefie ny mpampiasa azy
Havaozy ny mombamomba anao
Asio “tiako” eo ambanin'ny sary
Voaloto ny famantarana anao manokana (ID)
Voaloton'ny pejy babangoana
Feno “tiako” ny ahy ao anatin'ny fotoana maha-be olona
Aza mitady ahy ao amin'ny tambajotra, fa mivezivezy foana aho
Fiarakaretsaka, fiaramanidina, fiarakaretsaka
Tahaka izany ny fizotran'ny androko
Na aiza na aiza alehako
iPhone no mpitari-dalana ahy
Koa avoahy ny findainao
Tsindrio ny “play”
Gundogar Turkmen nanoratra hoe:
Tohizo Bratan [rahalahy] ny fanaovana tahaka izao
Mahafinaritra ianao Kakajan! Mbola tsy nisy olona nanao zavatra tahaka izao! Mahafinaritra ny lahatsary! Mahafinaritra toy ny mahazatra ihany koa ny mozika sy ny tononkira
Ianao no tsara amin'ny tsara indrindra
Be fitiavana i Kakajan amin'ny valinteniny hoan'ireo mpankafy azy:
Misaotra ny rehetra. Ry namana, manome aingam-panahy ahy ny fanehoan-kevitrareo
Sary avy amin'ny pejy VK ofisialin'i Kakajan Rejepov.
Tahaka ireo mpanakanto Turkmen hafa, izay efa nosoratan’ny GV teo aloha, mifantoka amin'ireo lohahevitra tsy miresaka politika tahaka ny fitiavana sy fiainan'ny tanora ao amin'ny renivohitra Ashgabat ireo hiran'i Kakajan.
Na dia tsy ao anatin'ireo mpanakanto “ethno-pop” (mpihira ara-poko) mahazatra asandratry ny governemanta aza izy noho ny lahatsary tahaka ity iray ity, mbola iray amin'ireo mpanakanto malaza indrindra ao amin'ny firenena izy.
Nisy lahatsary iray hafa ao amin'ny YouTube mampiseho an'i Kakajan nanao fampisehoana tamin'ny fisokafan'ny tsenambarotra iray ao Berkarar vao haingana, faritra fialam-boly iray malaza ho an'ny tanora Turkmen na dia mendrika hahazo mpijery betsaka sy velombolo kokoa aza ny fampisehoana ataony.
Raha babon'i Kakajan amin'ireo hira pop Turkmen ianao, jereo ireo lahatsariny hafa.